Toetra tsara toetra 5 manintona ny fahasambarana sy ny fifandraisana salama - Blog
Na dia tsy misy bala majika ho an'ny fifandraisana tonga lafatra aza, ary tsy misy olona faly isan'andro isan'andro amin'ny fiainany, dia azo antoka fa misy toetra amam-panahy tsara zarain'ny olona sambatra kokoa izay manampy azy ireo hitarika fiainana feno sy haharitra fifandraisana salama kokoa.
Ireto misy toetra 5 toy izany izay mamorona fototra iorenan'ny fahasambarana sy ny fifandraisana tsara:
1. Izy ireo dia tena matoky
Ny fahatokisana ny efitrano fivoriana 'toy ny sefo' ary ny fivezivezena manodidina ny birao, ny fibaikoana baiko ary ny fihetsika toa anao manana ilay toerana dia tsy fahatokisan-tena. Sady tsy manambany ny hafa hampiseho ny tenanao ho tsara.
Fiavonavonana izany, ary misy fahasamihafana miavaka.
Ny olona manambany ny hafa, na mila manao fitarainana lehibe momba ny hatsarany, vola be ananany, na manasongadina ny lanjan'izy ireo amin'ny hafa, dia tsy azo antoka, ary tena lalina, tsy faly. Eny, mamaky izany marina ianao, tsy matoky tena izy ireo, matahotra izy ireo ary ory.
Ny olona faly tsy manao ireo zavatra ireo. Tsy mila mihiaka avy eny an-tampon-trano izy ireo momba ny zavatra efa nataony na izay ananany. Manana fahatokisan-tena mangina izy ireo izay tonga amin'ny endrika fanampiana ny hafa nefa tsy mila ekena, ary tsy matahotra ampio ny hafa atahorana ho voasarona.
Matoky ny fahaizany izy ireo ary manandratra ny hafa fa tsy mandratra azy ireo. Fantatr'izy ireo hoe iza izy ireo ary tsy mila hitafy a olona sandoka handroso na hahatonga ny olona ho toa azy ireo.
Satria mahazo aina amin'ny hodiny izy ireo, tsy mijery ny rehetra ho mpifaninana mety hitranga. Manintona azy ireo ny olona. Vokatr'izany dia manana izy ireo fifandraisana mahasalama izay tsy rahon'ny fahasarotam-piaro na lolompo, satria miditra ao aminy toy ny tenany, vongan-doha, vongana sy ny rehetra izy ireo.
Tsy mila izany izy ireo ampitahao amin'ny olon-kafa ny tenany . Ny fahatokisanao tena sy ny fahaizanao dia hisarika fahasambarana, olona sambatra kokoa manodidina anao, ary fifandraisana salama kokoa.
2. Hitan'izy ireo Ilay sosona volafotsy
Jereo fa tsy nilaza 'positivity' aho. Teny feno entana izany fa heverin'ny olona fa mitondra fahasambarana toy ny vovoka angano. Mamafy azy eo am-pivoahana ny varavarana amin'ny maraina ianao ary mipoapoaka! napetraka ho an'ny andro ianao. Tsy izany no fiasa.
olona manana fanahy malalaka amin'ny fiarahana
Betsaka koa ny olona no mieritreritra fa tsy maintsy mitsiky toy ny adala isaky ny mpandalo ianao, ary mody milaza fa tsy mampaninona izay zavatra mahatsiravina rehetra mitranga aminao. Tsy positivity izany, na fahasambarana sarontava. Esory ilay sarontava.
Ny olona faly dia tsy mihazakazaka mody mankafy ny zava-dratsy rehetra sendra azy ireo. Tsy tian'izy ireo ny olona rehetra mifanena aminy, ary gaga! manana ny anjarany amin'ny andro ratsy koa izy ireo. Ny mahasamihafa azy dia rehefa tsy mahomby ny olona sambatra, na tojo sakana, dia tsy avelany hisakana azy ireo tsy fahombiazana ireo.
Hitan'izy ireo ny firakofana volafotsy.
Manaiky ny zavatra ratsy izy ireo, saingy mitady ihany koa ny hafatra, lesona na fotoana mety amin'izany sakana amin'ny lalana izany. Heverin'izy ireo ho toy ny zava-tsarotra atrehin'izy ireo ny fihemorana.
Izy ireo koa dia tsy mandray ny alahelony amin'ny olona. Tsy mampiala ny hafa amin'izy ireo izy ireo. Afaka miara-mipetraka izy ireo Fahadisoam-panantenana , ekeo ny dingana tsy mety ary mandroso. Ity rafitra miatrika ity dia mahatonga azy ireo ho sambatra kokoa amin'ny fotoana maharitra satria manakana azy ireo tsy hijanona, ary tsy handratra ny hafa izany.
3. Misokatra amin'ny fifandraisana izy ireo
Izay faly dia hampifaly ny hafa - Anne Frank
Teny hendry avy amin'ny zazavavy dimy ambin'ny folo taona. Fa marina ny tenin'i Anne Frank. Areti-mifindra ny fahasambarana ary mahasambatra ny hafa.
Afaka mamofona sandoka ny olona. Ny fihetsika tsy mitombina dia miteraka tsy fahatokisana. Mety efa hitanao io toe-javatra io teo aloha: io lehilahy io amin'ny fety mitsiky amin'ny rehetra, mihomehy amin'ny toerana mety rehetra, ary ny ain'ny fety, nefa mahatsiaro 'miala'?
Avy hatrany dia tsy tianao izy, fa tsy afaka mametraka ny rantsan-tananao amin'ny antony. Manova ny fitondran-tenanao ianao, mametraka ny mpiambina anao ary mijery azy miaraka am-piahiahy. Fa maninona Tsy nanao na nilaza zavatra tsy nety izy.
Izy io dia satria tsy mampiseho ny tena maha izy azy. Tsy mifandray marina amin'ny olona izy. Omeny azy ireo ny zavatra inoany fa tian'izy ireo ho re, na ho hitany, mba hahitana fifandraisana, saingy misy ny valiny mifanohitra amin'izany.
Ny fanadihadiana iray tao amin'ny oniversite Harvard dia nandinika izay mahasambatra antsika ary iray amin'ireo antony mahazatra: ny fifandraisana tsara dia mitazona antsika ho salama sy ho sambatra. Ny fananganana fifandraisana misy kalitao sy ny fifandraisana mitaiza, dia manampy antsika hanana fiainana sambatra sy lava kokoa.
Ny olona faly dia tsy matahotra mampifandray, mampiseho ny marefo sy ny maha-izy azy amin'ny hafa. Amin'ny maha-tenany azy ireo dia mamorona toerana ho an'ny hafa izy ireo ary mifandray amin'izy ireo.
4. Manome lanja ny olona sy ny zavatra niainany izy ireo fa tsy zavatra
Ny teny hoe 'tsy afaka mividy fahasambarana ho anao ny vola' dia misy marina aminy. Eny, eny, tsy hisy hiteny tsia amin'ny dolara an-tapitrisany na fiara fanatanjahan-tena vaovao, amin'ny faran'ny andro, ny olona sambatra indrindra dia tsy atao sambatra amin'ny fanangonana zavatra, manangona traikefa amin'ny fiainana izy ireo ary manodidina ny tenany miaraka amin'ny kalitao.
Matetika ny olona dia mampifangaro ny fahasambarana amin'ny vola, fa ny tena lazain'izy ireo dia ny safidy, izany hoe ny vola dia manome anao fahalalahana misafidy: afaka mandeha amin'ny sarimihetsika ianao amin'ny $ 20 anao, na afaka mijanona ao an-trano ianao, nefa amin'izany fotoana izany, manana ny safidy ianao handany izany $ 20 izany na tsia.
Misy fahefana afaka manapa-kevitra ny amin'ny hetsika manaraka tsy voasakantsakana. Rehefa tsy manam-bola ny olona, ​​izany dia mampihena ny safidiny ary ny tsy fisian'ity fanapahan-kevitry ny tena ity matetika dia mitarika fahatsapana tsy fahasambarana.
Rehefa nilaza izany izy dia olona manankarena maro no manam-bola, ary maro ny safidy, saingy tsy sambatra mandrakizay, trano, fiara ary akanjo no mino azy ireo no hitondra fifaliana ho azy ireo. Raha ny fitsangatsanganana an-tsena dia manome tosika fohy (ny fanadihadiana dia naneho fa ny fiandrasana ny fividianana entana dia mamoaka ny dopamine amin'ny ati-doha) amin'ny fanaovana ny mpivarotra ho 'sambatra' amin'ny voalohany, izany fahasambarana izany dia vetivety.
fanafihana ny lisitry ny fahafatesan'ny titan
Impiry ianao no nahita ireo marika teo amin'ny akanjo, nihantona tao anaty lalimoanao volana maro taty aoriana? Azonao atao ve ny milaza fa ilay lobaka dia nitondra anao fifaliana mitovy amin'ny fandaniana alina miaraka amin'ireo namanao akaiky? Iza no mety hahasambatra kokoa? Raha ny marina, ny fahatsiarovana ny zavatra niainana niaraka tamin'ny namanao dia hitondra tsiky foana eo amin'ny tavanao, fa ilay lobaka misy ny marika mbola eo amboniny kosa dia hadino ao anaty lalimoanao.
Ny fandaniana fotoana miaraka amin'ny namana sy fianakaviana, fanaovana zavatra tena tianao, toy ny fitsangatsanganana amin'ny andro migaingaina, ny filalaovana ny alika, na ny fahatongavana any an-tranon'ny namana hiresaka sy hisotro kafe, dia traikefa sy fotoana tsy misy vidiny ary hitondra fahasambarana ho anao rehefa mieritreritra azy ireo mandritra ny taona maro ho avy.
Fantatry ny olona falifaly izany, ka na manana vola aman-taonina aza izy ireo dia tsy miankina amin'izany hanatanterahana azy ireo.
5. Tsy mandray an-tanana manokana ny zavatra izy ireo
Ny olona faly mamela ny egôny eo am-baravarana. Miezaka ny hahatakatra izay manosika ny hetsiky ny olon-kafa izy ireo alohan'ny hanatsoahan-kevitra momba ny antony hitondrany fomba iray.
Na dia voatsikera aza izy ireo, na manao hadisoana dia manaisotra zavatra aminy izy ireo (ao indray ireo firakofana volafotsy ireo) ary takany fa tsy momba azy ireo ny zava-drehetra. Fantatr'izy ireo fa olombelona daholo isika ary tsy azo ihodivirana daholo isika amin'ny fotoana iray. Ny lakile dia ny tsy famelana izany hisolo ny fiainanao.
Ny olona izay miaro tafahoatra loatra, ary mino an'izao tontolo izao dia tsy te-hahazo azy ireo isaky ny mandeha, dia mahalana, raha sanatria, no faly. Nandany ny fotoanany nitady fahavalo izay tsy misy izy ireo, ary mahita antony manosika ao ambadiky ny teny sy ny asa rehetra. Izany dia mandreraka, manilika ny olona ary manakana ny famoronana fifandraisana misy dikany (ireo fifandraisana noresahintsika teo aloha ireo).
Ny olona sambatra kokoa ary manana fifandraisana tsara kokoa amin'ny hafa dia ireo izay tsy mandray manokana ny zava-drehetra. Manana ny fahamatorana ara-pientanam-po mba hahitanao izay mahazo ny hafa, ny fiantraikan'ny fihetsik'izy ireo amin'izy ireo, ary avy eo ampifanaraho amin'izany ny fitondran-tenany. Manana fiaraha-miory izy ireo ary tsy matahotra Mialà tsiny . Tsy mino izy ireo fa ny hoe miala tsiny dia very tarehy, fa kosa mahita azy ho ampahany amin'ny fitomboana ary lasa olona tsara kokoa .
Isika rehetra dia afaka manana ireo toetra tsara ireo, mila miezaka fotsiny isika. Ny lalao fifaliana dia tsy lalao famaranana, fa dia lavitra amin'ny fiainana. Ankafizo ny traikefa nahafinaritra anao!
famantarana fa tsy liana aminao ny lehilahy
ny fomba tsy ho sipa clingy
zavatra mahatsikaiky hatao amin'ny namanao akaiky indrindra
ahoana no hahafantarana raha te hanao firaisana ny olon-tianao
inona no hatao rehefa mandainga izy